efrijini Quick, izixhobo neGauteng Quick, efrijini siba, Itonela freezer-Zibhabha COLDCHAIN
Self-ingqokelela Spiral efrijini
Impingement Tunnel efrijini
Fluidization IQF efrijini
Qhagamshelana Precool efrijini
Qhagamshelana Plate efrijini
Liqulathwe-ngokwalo Plate efrijini
Zibhabha COLDCHAINEngineering lomhlaba ntsha
Zibhabha kakhulu kubunjineli ifriji kunye noshishino ukutya, inikeza iimveliso imali ngoomatshini kunye zombane kunye neenkonzo ingakumbi zasemanzini kunye nokutya mveliso ukuhlangabezana neemfuno ezithile Abathengi bethu kunye iinkcukacha zobugcisa zale mihla eliphezulu.
Thina zibanga ifriji mveliso kunye noshishino ukutya.
Block Ice Machine Oluludaka Ice Machine Tube Ice Machine Flake Ice Evaporator Ulwandle Flake Ice Machine Industrial Flake Ice Machine
kwaselwandle yenkukhu khekhe iimveliso diary Ukufraya baking
Qhagamshelana Nathi xa ufuna umcebisi ngamagcisa.
Yenza The Smarter Choice
Zibhabha ColdChain, Ukudibana oluqinile ZhongRong Group kunye Zibhabha UK Foodtech Group, eyisingela lemveliso izixhobo oluphambili ukuqanda ekhawulezileyo kunye noomatshini ukutya yokudla.
Unyaka-15 ngaphezu amava yesicelo neGauteng nobugcisa bonxibelelwano.
Siye phambili umgca kwemifanekiso,inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho kunye nobungcali kunye umakad ...
Ngoqeqesho njalo technical, ngokuba lulondolozo lokuthintela kunye nokuphuculwa kweenkqubo zokusebenza, Zibhabha ihlala isebenzela zokuphucula ucikizeko imveliso kunye nokusebenza ukukhusela utyalo-mali lwethu customers`.
iindawo ezingundoqo abangenzi nto ngalo stock yi Zibhabha ukuphucula ukusebenza isityalo sakho kwaye zinongezele ungeniselo imveliso.
Zibhabha supply zibe zizele izixhobo neGauteng ekhawulezayo kwaye wenze uyilo ilungiselelwe ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zamashishini ukutya.
Yiba inyathelo elinye phambili kwaye usoloko efumaneka naliphi ixesha isikhokelo sethu inkonzo. Professional, eliphezulu esebenzayo, impendulo ekhawulezileyo ukuqinisekisa ukuba akwazi ukufumana ulwaneliseko.
Phonononga Technologies YETHU kokugcwaliswa
Zibhabha ColdChain bugcisa nesuka kuyilo eYurophu: ukusebenza eliphezulu power eliphantsi, ukhuseleko kunye nococeko. I-design product ihlanganise kwithekhinoloji ehamba Europe kunye nezakhono zobugcisa, isixhobo senziwa phantsi ubuchule bemo ukuthengwa kwempahla ngokunjalo. Nge ezintsha eqhubekayo yobuchule kunye nokuphuculwa imveliso, Ngoku Zibhabha uphethe amaqashiso amalungelo obunini kushicilelo nokuthengiswa komsebenzi wezindlu, njenge: inkqubo neGauteng siba esebenzayo eliphezulu, inkqubo eliphezulu pre-injini esebenzayo, inkqubo neGauteng impingement, inkqubo neGauteng fluidization, technology defrosting oluzenzekelayo, technology lokucoca esizenzekelayo ngobuchwepheshe komoya kakuhle. ukusebenza eliphezulu Amaxhwele, power eliphantsi kushishino chain abandayo, Zibhabha ijonge ukudala ingeniso ephakamileyo nokukhuthaza ukukhula okuzinzileyo ukuze abathengi.
Gcina Up Ukuze Umhla
Bhalisela kwincwadana yethu size silandele on media loluntu
izisombululo yethu elihamba
Ebandayo Fruits Solution & Industry nemifino
Zibhabha neGauteng unique iteknoloji yenza iziqhamo kunye nemifuno emkhenkceni ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka ukuze kucutheke kweeseli, ukuba inika ndlela ingabizi kakhulu ukwenza intlawulo kuhlaziyeka-kwe-fresh iimveliso zokutya ezifundisa lula sixa abathengiswa ngexabiso premium.
Qhwa Solution Kuba Industry Ukutya okulungiselelweyo
Zibhabha usebenzisa ubuchwepheshe phambili kuyilo isiko nokwakha oomatshini qhwa ukuba ilingane iimfuno ezithile ukutya uzilungiselele. umbane zethu IQF kusebenza ngokukodwa kakuhle iimveliso intwana encinane ezifana amadombolo okanye adlula yasentwasahlobo. Sisoloko ukuyila iimveliso zethu ukuba umbane ngokufanelekileyo nokufikelelekayo ukugcina iimveliso uyaqala kakhulu elide emva kwenkqubo neGauteng.
Qhwa Solution For Industry Bakery
Zibhabha silwenza izixhobo neGauteng ukuba ilingane iimfuno zakho. Kuba iimveliso ukusuka isonka iikeyiki kunye cookies okanye namakhekhe kunye pasta, ukutya owomileyo kunye yokubhaka candelo libandakanya isethi ezahlukeneyo iimveliso zomgubo-based kuquka nemixube izonka kunye neemveliso intlama ekhenkcezisiweyo. Zonke iimveliso zethu zenzelwe ukuba umbane ngokufanelekileyo ezifikelelekayo.
Qhwa Solution Kuba Industry yenkukhu Processing
Le ushishino lweenkuku iye imiba emininzi kangaka ukuba ukhathazeke, cross-kwamagciwane, nokonakalisa, ukukhula bacteria, yokwanda kweendleko, kunye nemithetho umthetho ukutya. Zibhabha isebenza ngaphandle izisombululo ezi ngxaki ukuze ukwazi ukusebenza ngalo kwaye uzimele iinkukhu uphilile, fresh bangasukela ukwenzela ukugcina abathengi zakho babuyele okunye.
Qhwa Solution Kuba Industry Seafood Processing
Zibhabha isebenza ngokusondeleyo namaqabane kwaselwandle processing lokuyila nokwakha imigca nemveliso yeentlanzi, iimbaza, i-shrimp, nezinye iintlanzi. design yethu ukufanela neteknoloji ebandayo yenza ulawulo olululo kunye ngokucokisekileyo esaziwa incasa entsha ngokungathi Kwathi nje emanzini.
Sayina Ukuya Newsletter wethu Fumana Updates Latest
© Copyright Nortech 2018. Kulungile reserved.